Sida loo adeegsado farta lagu akhristo | Abuurista khadka tooska ah
Qoraalku waa aragti ahaan tartan joogto ah adduunyada qorayaasha ah ee u hanqal taagaya inay yeeshaan aqristayaal tiro badan waana kan qorayaashu jecelyihiin macquul maaha soo jiidashada akhristayaasha qiima kasta ha lahaadee. Marka way ku adag tahay qorayaasha inay hel akhristayaal wanaagsan adduunka dhexdiisa.
El nuxurka maqaalka Shaki la'aan waa xubinta ugu muhiimsan, si kastaba ha noqotee, nuxurka wanaagsan maahan dammaanad qaadka tirada badan ee akhristayaasha bartaada iyo dareenkaas, waa inaan ka warqabnaa waa maxay arrimaha taasi waxay soo jiidan kartaa akhristayaal badan oo ku saabsan maqaalladayada.
1 Nooca qaab qoraalka si loo soo jiito macaamiisha
2 Waa maxay qorista qoraalka?
Nooca qaab qoraalka si loo soo jiito macaamiisha
Hadda waxaa jira qayb weyn oo ka mid ah qorayaasha ama nashqadeeyayaasha in aysan tixgelin siin dhowr arrimood in dhamaadka ay saameyn badan ku yeeshaan inta jeer ee akhristayaasha boggooda, si qalad ah u fiirinaya dhinacyada sida waxyaabaha ku jira, laga yaabee in qaar ka mid ah qodobbada sawirada ee qoraalka ama ereyga laftiisa ah. Tani waxay kaliya ka dhigeysaa qoraa ama naqshadeeye illoobo qodobbada runtii muhiimka ah si aad ugu guuleysato aqrinta qaab dhismeedka akhriska baloogga.
Sidaa darteed, qodobkani wuxuu soo bandhigi doonaa dhinacyo la tixgelinayo, isagoo soo bandhigaya waqtigan sida qoraalka sababaha ugu muhiimsan, kaas oo ka kooban qaabka iyo nooca xarfaha aan ku isticmaalno qormooyinkeena.
Waa maxay qorista qoraalka?
Nooca sawirka isbadal samayn kara inta u dhaxaysa in la akhriyo iyo in kale. Iyo haa, waxay umuuqataa xoogaa xad dhaaf ah, laakiin waa lagama maarmaan in la ogaado sida loo tixgeliyo dhammaan fursadaha akhristayaashayada. Qoraha ama naqshadeeyaha garaafka Waa inaad naftaada galisaa kabaha aqristayaal badan, si aad uga feejignaato waxa noqon doono dalabyada uu aqriste soo bandhigi karo ka dib markaad aqriso qodobbada la soo bandhigay Marka, qoraagu waa inuu si ku-meel-gaadh ah u qaataa doorka akhristaha, isagoo ogsoon in maqaalka uu akhrinayaa ay gebi ahaanba ku cusub tahay indhihiisa.
Qoraalku wuxuu noqon karaa wax aad u fiican mahadsanid suurtagalnimada weyn ee ah inaan u qaabeyno sida aan jecel nahay iyo qaabkeena. Si kastaba ha noqotee, markaan isku dayeyno inaan saameyn ku yeelano dadka badankood, sida caadiga ah dhadhankayagu wuu iska tuuraa, isagoo keenaya dookha ugu badan ee bulshada, isku dayaya horumariyo muuqaal nooc ah marka la eego doorbidyada wadajirka ah, taasi waa sida ugu macquulsan ee wakiil ah, si ay suurtagal u noqoto qanciso dhagaystayaasha ugu macquulsan, kiiskan, akhristayaasha.
Laakiin qorista wax u dhimi kara shaqadeena, maadaama ay tahay inaan u tixgalino taas akhristayaasha, tayada shaqadeenu waxay leedahay marin aad u gaaban oo qalad ah iyagaSidaa darteed, faahfaahinta ugu yar ee qaab dhismeed ama muuqaal ah ayaa ku filnaan doonta in la xiro bogga oo la doorto qoraa kale oo aagga ku dhammaystira. Taas bedelkeeda, waxaa aad u muhiim ah in akhristaha uu korsado a qaab qorid quruxsan, laakiin khiyaano, iswaafaqsan, laakiin aan sidaa u adagayn, waa barta dhexe ee udhaxeysa soo jiidashada, soo jiidashada bulshada iyo xirfadlaha.
Qoraaga ama naqshadeeyaha sidoo kale waa inuu tixgeliyaa cabirka fartaadaHagaag, sida naqshadeeyayaasha, waa inaan xitaa ka fikirnaa suurtagalnimada in akhristaha uusan ka warqabin shaqada zoom ee kombiyuutarkiisa. Waxaa lagama maarmaan ah in akhristaha loo soo bandhigo maqaal leh dhammaan waxyaabaha suuragalka ah ee looga takhalusi karo nasiib darrada muuqaalkiisa, iyadoo la siinayo raaxo iyo la qabsi fudud oo la xiriira akhriska oo dhan.
Marka, waa arrin tixgelin la siinayo dhinacyada muuqaalka iyo dhismaha, taas oo ay tahay inaan samayno ka hor intaanan daabicin maqaal, maaddaama nuxurka, si kasta oo uu u wanaagsan yahay, uusan noo dammaanad qaadi doonin tiro wanaagsan oo akhristayaal ah oo ku jira bartayada.
Nooca sawirka, iyo sidoo kale kuwa kale xubno muuqaal ah waxay noqon doonaan farqiga weyn ee udhaxeeya tiro wanaagsan oo booqashooyin ah iyo liisaska booqashooyinka aan sugnayn. Waa muhiimadda ugu weyn in qoraaga ama naqshadeeyaha uu xiiseynayo inuu helo dadweyne wanaagsan marka loo eego inta jeer ee ay tixgeliyaan faahfaahinta halkaan lagu soo bandhigay. Ma rabtaa booqashooyin? Tixgeli noocaaga qoraalka, beddel, oo fadhiiso oo sug natiijooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sida loo adeegsado farta lagu akhristo